Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana ao Elsagene | Tikvah Dobsch miaraka amin'ny fiainana an-taonany Phobias, Kalesin-tsarobidy sy ny traikefa nahafaty nanakaiky - Fikarohana momba ny fitondran-tena
Tranga natolotr'i: Ruth Dobsch, renin'i Tikvah
Notadiavin'ny: Tikvah Dobsch
Famaritana: Tikvah Dobsch
Tikvah Dobsch, ny fiainany tamin'ny fahazazany taloha Phobias & Tahotra ny ho faty tanora
Ny anarako dia i Tikvah Feinstein. Teraka Tikvah Dobsch tany Pittsburgh, Pennsylvanie aho tamin'ny 1944. Fianakaviana manan-takaiza valo izahay. Izaho no ilay fahenina fahenina nateraky ny fiainan'i Ruth sy Rudolph Dobsch. Nifindra avy tao Sudeten ny raiko, teo amin'ny sisin-tany Alemana niaraka tamin'ny tsekôslôvakia fony fahatanorany. Niasa tao amin'ny milina vy izy. Renim-pianakaviana teratany amerikana ny reniko. Natsangana ny ray aman-dreniko, saingy i Rota reniko dia niova ho amin'ny Jodaisma tamin'ny fotoana nahaterahako. Notaizana tamin'ny finoana jiosy aho. Na ny ray aman-dreniko dia nahazo diplaoma tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa, saingy tsy dia mahazatra izany fotoana izany.
Fony aho ankizy, dia nampiseho fôbiosa mahery aho. Tsy afaka nitondra na inona na inona teo amin'ny tendako aho, indrindra fa izay rehetra mifatotra toy ny fehiloha. Tsy afaka nitelina pilina aho. Ho taitra aho avy eo raha toa ka misy mihetsika na tsy mamoha varavarana. Nataoko tanteraka ny haizina.
Tsy navelan'ny torimaso aho raha natory noho ny fahatahorana ny maizina. Tsy maintsy nisambotra ahy i Neny, tohano aho raha nidradradradra aho mandra-patorako isaky ny hariva talohan'ny haizina. Nanao ratsy ratsy aho ary nifoha tampoka. Nosamborin'ny kalesy aho ary tsy afaka niantso fanampiana aho, na dia fantatro aza fa nisy olona tao amin'ny efitrano hafa teo akaiky teo, izay hihaino ahy raha mba azoko atao ny miantso vonjy aminy. Ao anatin'ilay nofy dia mihidy ny vavako ary afaka mitebiteby amin'ny nify aho. Nifoha aho tamin'ny feo mampihorohoro ahy. Nihamafy ny filatsahan-kofidina nandritra ny fahazazana ary nitohy hatramin'ny adoloka.
Fihetseham-po ho ahy ny fahafatesana, toe-javatra mahatsiravina. Nahafantatra tsara ny fahafatesana aho ary natahotra ny ho faty tanora.
Ny Sary Fotoam-pahalalahana voalohany an'ny Tikvah sy ny tovovavy iray dia maty tany anaty efitra fandraisam-bahiny
Lasa sambatra kokoa ny fiainako rehefa lasa ampy taona aho mba hianatra. Faly erỳ aho nianatra sy nahafaly ny zava-baovao rehetra teo amin'ny fiainako. Tamin'ny fotoam-pianarana voalohany, dia nalain'ny sary sary izahay. Mba hahafahako vonona amin'ny sary fitifirana, nosakanako ny reniko, nanasa sy nanapaka ny voloko tamin'ny fomba fohy kokoa noho ny mahazatra.
Tamin'io fotoana io, tao amin'ny 1950, raha nanomana ahy ho an'ny sary voalohako aho, angamba noho ny fitovitovy amin'ny tarehimarika hita mazava amin'ny alaheloko vaovao, dia nizara tantara momba ny zazavavy iray nahafaty 6 taona talohan'ny nahaterahako ny reniko. Tsaroako ny resaka nifanaovan'ny reniko. Sarotra ny tsy hitadidy. Ny fahafatesan'ny ankizy dia tsy afaka hiresaka velively velively.
Ilay tovovavy, Elsagene, nanohy ny reniko, dia maty indray alina tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny tao amin'ny trano fonenany niaraka tamin'ny reniny, anarana atao hoe Etta. Voahidy ilay varavarana, nampiana haingana ny reniko, toy ny hoe nanome fanazavana izany. Nanampy ahy ny reniko fa nihazakazaka i Etta brothel.
Ny fanararaotana ara-nofo an'i Elsagene sy ny faniriany hanana an'i Rota ho Reniny
Talohan'ny nahafatesan'i Elsagene, nilaza ny reniko fa nitaraina i Elsagene fa tena tsy sambatra izy noho ny fanazavana ara-batana lalina mba hahatonga ny fitarainany fa matetika izy no niaritra ny sakaizan'ny reniny. Niangavy i Elsagene mba hijanona miaraka amin'ny reniko. Elsagene dia niangavy azy hoe: "Azafady, avelao aho hiaraka aminao. Nahoana no tsy ianao no reniko? "
Nanazava i Rota reniko fa nangoraka an'i Elsagene izy ary te hanampy azy, saingy ny reniko tamin'izany fotoana izany dia zatovo iray ihany, kamboty iray niaina niaraka tamin'ny rahavavin-dreniny, Elsie sy i Eugene vadiny.
Ruth Mino fa i Tikvah no fampananganan'i Gène Elsagene
Nambaran'ny reniko avy eo fa nihevitra izy fa i Elsagene no nateraka. Tena matotra izy saingy tsy azoko antoka fa na dia azony aza izany na nino azy.
Mba hihaino ity tantara ity dia mbola taitra ihany aho, ary dimy taona na enina taona raha tsy mahatakatra tsara. Tamin'io taon-jaza io dia efa nampidirina ho faty aho. Fantatro ireo rahalahy kambana, ireo zaza vao teraka ray aman-dreniko, izay maty vao teraka. Fantatro ihany koa ny fahafatesan'ireo ankizy mpifanolobodirindrina, iray amin'ny fandevenana sy ny iray amin'ireo aretina, saingy nanelingelina ahy mafy izany hoe misy zaza maty ao amin'ny efitra fandroana!
Ankoatra izany, ahoana no ahafahako ho ilay zazavavy maty? Tsy maty aho. Velona aho.
Lasa ny fiainana fa ny fiainana any an-dranomasina dia mampitombo
Ankoatra ny nanatrika teo nandritra ny resadresaka maromaro momba an'i Elsagene izay nisy teo anelanelan'ny reniko sy ny anabaviny, izany rehetra izany no nahafantarako ny zazavavy kely izay hita maty tao amin'ny efitrano fatoran'ny trano fonenany. Navelako izany. Inona koa no azoko atao? Ny fahafatesan'i Elsagene dia mistery nandritra ny taona 60 teo amin'ny fiainako.
Rehefa nihalehibe anefa ny raiko, dia nitombo ny nofy ratsy momba ahy, ny filalaovan-dratsy, ny zavatra iray nanosika ahy, ny zavatra nanakenda ny vavako, ka tsy afaka nanokatra ny vavako hiantso vonjy aho, nandritra ny fotoana nahafantarako fa Olona hafa tao amin'ny efitrano hafa izay hanampy ahy raha afaka mitomany fotsiny aho. Izaho dia nifoha mbola nalemy, nihorohoro tamin'ny hafanana mangatsiaka. Nogadraina tao anaty vatana iray izay tsy nety nandeha aho. Tsy afaka nifindra toerana aho taorian'izay. Tsy sahy miverina matory intsony aho satria natahotra aho sao hisy loza hafa indray.
Indraindray ny nofy ratsy dia natomboka ho nofy izay lasa nampihorohoro tampoka, miaraka amina lohahevitra mitovy amin'izany hatrany. Ny iray dia nanomboka tamin'ny (hitako ity hafahafa ity) vorona iray, avo amin'ny hazo, nibanjina ahy, ireo maso mainty feno hatezerana foana, saingy tsy natahotra aho tamin'ny voalohany. Nahita ny fahalianan'ny vorona na ny fahatezerany aho, saingy fantatro tamin'ny nofiko fa tsy nanao na inona na inona hampihantsiana ilay vorona aho ka tsy nahatsiaro fandrahonana. Mandra-pahatongan'ny, ilay vorona manana maso tezitra dia nanidina nanidina, voromailala tampoka tamiko ary nanaikitra ahy, nilentika ny vavany tamin'ny hoditry ny tanako. Tsy afaka nampifanintontsintona azy aho rehefa nihantona mandra-panaikitra ny hoditry ny ankihiben-tànako sy ny rantsan-tànako. Nifikitra mafy izy, mandra-pahatapitra tanteraka ny nofo ary tsy nisy azo ahantona. Navoaka noho izany, nanidina ny vorona, satria nizara roa vorona izy. Vorona mitovy loko miloko fotsy dia nipoitra avy tamin'ny vatan'ilay vorona mainty. Ny nofy dia fanoharana famonoana olona mahery setra, araka ny fahitako azy ankehitriny, raha jerena ny horohoro sy fikorontanana tanteraka tsapako nandritra sy taorian'ilay nofy. Ao amin'ny nofy dia misy ny fanafihana, ny tolona ary aorian'ny ratra manindrona dia navotsotra ny vatana fanahy iray izay maneho ny fahafatesana. Mino aho fa tafita velona amin'ny fahafatesantsika ny fanahintsika. Ity finoana ity dia tohanan'ny fanandramana iray tamin'ny fisamborana aretim-po tamin'ny taona 2007, rehefa nitana ny fahatsiarovan-tena avy tany ambony korontana aho rehefa niasa tamin'ny vatako ireo mpitsabo.
Tao amin'ny nofy ratsy iray izay nanombohako tamin'ny nofinofy ihany koa, dia nisy omby iray feno hatezerana nibanjina ahy tamin'ny masoko nandrahona, niverimberina nibanjina ahy ary nibanjina ahy avy tao anaty korra. Na dia nosoratany aza dia tsy niasa saina aho. Izany dia mandra-pialan'ilay omby goavambe nandositra ilay fefy ary nirohotra nanatona ahy.
Ny nofy tahaka ireo dia tonga tahaka ny nofy ratsy ihany. Mahatsiaro foana ny alim-pandrenesana, miaraka amiko aho, tsy afaka miantso vonjy, fantatro raha azoko antsoina hoe hanampy ahy. Mifoha ao anatin'ny hatsembohana mangatsiaka aho, natahotra ny hiverina hody aho, manahy mandritra ny herinandro maromaro. Maro ny nofy ratsy tahaka izany.
Nanana tahotra tsy an-kiato ihany koa aho ny amin'ny fahafatesan'ny tanora. Naniry mafy ny hiaina andro lava aho, tahaka ny olon-drehetra, heveriko fa, fa ny fahafahan'ny fahafatesana tany am-piandohana foana dia tao ambadiky ny sainiko. Zavatra tsy manan-danja izany. Niaina tamin'ny antso maro aho teo amin'ny fiainako, saingy nisy zavatra niainako.
Sariitatra sy Fikarohana momba ny Sarin'i Elsagene: Fisehoan-javatra teo amin'ny fiainana teo aloha
Tao amin'ny 2011, nanomboka nanoratra tononkalo iray momba ny fiainako aho ary teo am-pametrahana ny olona ao amin'ny fianakaviana ho an'ny saripika antitra. Efa nahazo ny sarim-pianarako voalohany aho. Avy amin'ny fananan'ny anabavin'ny reniko efa ela. Izy no namonjy izany sary izany nandritra ireo taona rehetra ireo. Raha tsy nanao izany izy dia tsy nahita izany tamin'ny mason'ireo olon-dehibe.
Tamin'io fotoana io, avy tamin'ny manga, nametraka fihaonana tamin'ny fifandraisana tamin'ny fianakaviana tsy tapaka ny anabaviko, havan'ny rafozana, izay nanana boaty an-tsary efa tranainy hizara. Nangataka ahy izy mba hiaraka.
Nandritra ny fivoriana fanaovam-pisakafoanana dia nangataka ilay vehivavy aho raha fantany ny tovovavy iray atao hoe Elsagene. Nahaliana ahy ny nahita sary iray izay nolazain'ny reniko tamiko. Gaga aho fa ny anabaviko tsy nahalala an'i Elsagene. Hitako fa mampiseho izany rahavavy izany izay nandamina ilay fivoriana efa ho dimy taona latsaka noho izaho, nefa tsy niresaka tamin'i Elsagene mihitsy i Rota reniny.
Gaga be aho rehefa nilaza ilay vehivavy hoe, eny fa reny i Elsagene, zanakavavin-dry Etta. Ny vehivavy dia nitantara fa rehefa lasa zokiolona i Etta, dia niaina niaraka tamin'ny fianakavian'ity vehivavy ity izy. Tsy nanana sarin'i Elsagene niaraka taminy izy, fa andro vitsy taty aoriana dia nandefa sarin'i Elsagene tamiko izy. Rehefa nahita izany aho, dia gaga aho, raha nahita ny tenako tamin'ny sarin'i Elsagene. Toy ny nataoko tamin'ny lahatsariko tamin'ny sekoly ambaratonga voalohany izy.
Ny sarin'i Elsagene dia nahatonga ahy hieritreritra ny zavatra nolazain'ny reniko mihoatra ny 60 taona talohan'io, fa noheveriny fa izaho no toerampanorenana indray ao amin'ity tovovavy ity izay hita maty tao amin'ny efitra fandroana. Tamin'io fotoana io, tamin'ny taona 2011, dia nanapa-kevitra ny hikaroka ny fiainan'i Elsagene aho.
Iza moa i Elsagene?
Nianarako fa ny renin'i Etta, Elsagene, fony izy zatovo dia voan'ny trolley iray, ka nahatonga ny fahasembanana efa ela no nahatonga azy ho sarotra taminy. Maty i John, vadin'i Etta, tamin'ny fiandohan'ny Depression Lehibe, raha telo taona monja ny zanaka lahimatoany, Elsagene. Taorian'ny fahafatesan'i Jaona dia nanomboka niaina irery ny zanak'izy ireo, ny zanany lahy sy ny zanany vavy.
Etta sy Elsagene zanany vavy dia nifindra tao amin'ny trano fonenana, akaikin'ny toerana misy ny vadin'i Etta, Eugene, sy Elsie vadiny. Tsarovy fa i Elsie dia nanangana an'i Neny, Ruth, taorian'ny nahafatesan'i Ruth. Ny renin'i Elsie sy Ruth dia rahavavy.
Noho izany, izaho sy i Elsagene dia tsy mifandray amin'ny rà, fa amin'ny alalan'ny fanambadiana. Raha ny marina, ny fametrahana ny anaran'i Elsie, anabavin'i Etta sy i Eugene, rahalahin'i Etta, dia ny fomba namoronana ny anarana Elsagene.
Ny fanararaotana ara-nofo an'i Elsagene
Mba hahatonga ny farany hihaona taorian'ny nahafatesan'i John vadiny dia niasa ho an'ireo olona nihazakazaka i Etta Speakeasy ary ny trano fialofana eo amin'ny ilany avaratr'i Pittsburgh nandritra ny fandrarana sy ny Fahagagana lehibe amin'ny 1930s. Nihaona tamin'ny lehilahy iray i Etta tamin'ny alàlan'ny asa izay naha-sipa azy. Tsarovy fa nizara tamiko ny reniko fa nitaraina i Elsagene fa ny ankizilan-dreniny dia nitarika azy hitodika ny tebitebiny. Ny sipany i Etta dia toa manararaotra an'i Elsagene.
Ny ankizy dia tsy mamela dian-tongotra maro amin'ny fiainany. Toa, nandritra ny fikarohana, nandritra ny fotoana maharitra, dia nanjavona fotsiny izy. Saingy nahita fanazavana sasantsasany tamin'ny alalan'ny fanisam-bahoaka sy ireo rakitsoratra hafa aho. Tamin'ny alalan'ny fikarohana nataoko dia nahazo ny taratasy fanamarinana nahafaty an'i Elsagene aho, izay azo antoka, azoko ny nahazo na dia tsy nifaneraseran'ny fianakaviako aza aho, fony tamin'ny 2010 dia navoaka ho lalàna fa lasa rakitry ny fahafatesana 50 taona taorian'ny nahafatesan'ny mponina iray any Pennsylvanie.
Ny zavatra hitan'i Elsagene momba ny fizahana ny aotomia dia mifanaraka amin'ny Tikvah's Life Life Nightmares tamin'ny naha hafahafa azy
Nahita ny anarany tamin'ny endriny aho ary maty tamin'ny volana 25 1938. Na dia fantatry ny besinimaro aza fa maty tany an-trano izy, dia voarakitra an-tsoratra ny fahafatesan'ny maty fa tao amin'ny Hopitalin'ny Allegheny General izany.
Nisy otopsy. Nisy tsiranoka tao ambany ravina hita teo amin'ny fototry ny atidohany. Amin'ny ankapobeny dia misy rà mandriaka ao amin'ny tendany ao ambanin'ny atidohany ary miparitaka any amin'ny toerana misy ranon-tsavoka mitsofoka amin'ny atidoha sy ny tadin'ny hazon-damosina, ka miteraka tsindrona mampidi-doza eo amin'ny atidoha. Araka ny lahatsoratra novakiako momba ny toe-javatra, dia fahavoazana iombonana no hita ao amin'ny sendra zazakely. Ankoatra izany, dia azo atao ny manenjika azy sy ny herisetra hafa amin'ny loha sy ny tendany, na mahalana dia mety ho hafahafa raha misy ny tsy fahampiana. Na izany na tsy izany, ny vokatr'izany dia ny loha-katezerana, ny fahalemena, ny paralysis ary ny fahafatesana.
Ny fitsangatsanganana amin'ny vatana vaovao ary ny fiainan'ny ankizy dia fohy kely
Rehefa nahita ny sarin'i Elsagene tao amin'ny 2011 aho dia azoko ny nofy ratsy momba ny fahazazako sy ny fahatanorako. Nanangona ny sarin'ny Elsagene aho. Tsy namaha ny zava-miafina momba ny antony, fa ny maty sy ny nahafatesany.
Ny anjarako tamin'izany dia nomeko ny ankizivavy nangina aho, izay nanintona ahy ho any amiko, amin'ny alàlan'ny fotoana sy ny habakabaka mba hipetrahan'izao tontolo izao ao anatin'ireny pejy nosoratany ireny. Hizara nofinofiko farany aho.
Ny nofinofy nahafatesan'i Tikvah taloha
Tao anatin'ny nofy dia nandry teo am-pandriana aho. Ny hariva dia misy lehilahy iray izay mahafantatra ahy, mipetraka eo am-pandriana. Samy eo ambonin'ny bodofotsy isika. Mahatsiaro ho voaro sy ara-boajanahary izy io, tahaka ny efa niara-nanahaka anay imbetsaka. Izaho dia eo an-damosiko any ambany, kely dia ampy mba hifikirana amin'ny tongotro miondrika manify kely manerana ny sakan'ny feno. Miverina amiko aho. Maivana sy mafana ny efitrano. Ilay lehilahy dia manao sarin'olona matanjaka mipetraka eo am-pandriana manoloana ny lohany, mamaky zavatra, mamaky amina pejy iray misokatra mivoha, fehikibo madio ao afovoan-tanàna, mitovy endrika aminy, tahaka ny taratasy. Azoko an-tsaina fotsiny.
Mianatra ny fampahalalana, tarehimarika na tatitra iray na zavatra amin'ny teny eo amin'ny pejy izy. Nosakanany ny taratasy teo am-pihotsahan'ny tanany ary hitako fa ny sisin'ny lohahevitra napetraka dia mitsambikina sy mangovitra. Izany dia fanehoan-kevitra hafahafa ho an'ny taratasy iray nalain'ny valopy, eritreretiko. Tsy mandinika be loatra aho. Be atao amin'ny famakiana boky mampihomehy aho. Na dia fantatro aza fa tezitra amin'izay vakiny izy dia tsy mahatsiaro ho atahorana. Ny masony dia miorina amin'ny tarehimarika na zavatra, mampiaiky ahy fa tsy maintsy manova ny vaovao izay vakiny izy. Mamaky azy io hatrany izy. Zava-dehibe ho azy izany, saingy tsy mahatsikaritra ny fampahalalana aho ary tsy mino fa tafiditra ao anatiny aho, afa-tsy ny mahita ny mampalahelo azy. Tsy mahatsapa aho fa afaka manao zavatra afa-tsy ny mitoetra mangina. Tsy matahotra aho. Na dia mampitodika ny saiko aza ilay lehilahy ory.
Na dia mimenomenona aza izy ary miteny zavatra tsy azoko atao amin'ny feo malefaka ary mihetsika manatona ahy. Na dia miha-miakatra tsikelikely eo amin'ny tendako aza izy ary mamihina tsara ny tanana roa eo amin'ny tendako. Tohina aho. Fantatro amin'ny zavatra ataoko fa tsy amin'ny tendako. Miatrika azy aho. Mampatahotra ny masony. Lasa mainty sy mainty toy ny alina ny mpianany. Miala amin'ny tanany aho. Manatsotra ny molony izy, miondrika, rambony, ary mamihina ny tendako amin'ny tanana roa izay manodidina ny sofiko sy ny tendako manontolo. Miverimberina foana izy amin'ny herin'ny hery lehibe sy ny toa hatezerana. Henoko ny rivotra mihazakazaka, toy ny mihazakazaka amin'ny sofiko, isaky ny mihomehy izy, ary mihazona mafy ny tanany amin'ny tendako, manosika ny lamosiko, toy ny karavasy, mihamafy kokoa amin'ny tsirairay.
Misy fanaintainana lehibe eo amin'ny tendako sy ny lohako, mampihorohoro ahy ny fampihorohoroana sy ny fisavorovoroana mandra-pahalasan'ny alahelo. Miala amin'ny vatako ny sandriko, mipoaka ny ranjoko amin'ny kapoka elektrika ary hitako fa tsy afaka mampitraka azy ireo aho. Mihamahavona ny valanoranonao, avy eo malemy, toy ny fananganana. Ny arofoko any aoriana ary avy eo ny vatako manontolo dia mihamahazo. Ny fangirifiriana ao an-dohako dia toy ny kotrokorana, toy ny ati-doha nipoaka. Mihevitra ny reniko aho. Tiako ny reniko. Nefa tsy ao izy. Ny zavatra farany hitako dia ny endriny, ny fanehoana fankahalana na zavatra toy izany, ny masony mamiratra, ny fikotrokotrony vetivety. Tahaka ny akoho iray aho no lasa, ny rivotra rehetra dia nesorina tamiko. Tohiziny foana izy. Tsy afa-miaina aho. Matahotra aho, nefa tsy afaka mikiakiaka. Fantatro fa misy olona ao amin'ireo efitrano hafa; raha afaka miantso aho fa hihaino sy hanampy ahy. Mijanona mainty izao tontolo izao. Nifoha aho tamin'ny fanombohana. Mieritreritra an'i Elsagene aho.
Izany no nofiko ratsy indrindra farany. Faly aho miresaka fa tsy nanambady ratsy aho hatramin'ny 2008 na izany. Toa mampiditra fiadanana ho an'ny fanahiko ny fampidirana ny tahotro sy ny tahotry ny alina amin'ny fiainany sy ny fahafatesany.
Inona no nitranga tamin'i Elsagene?
Inona no nitranga tamin'i Elsagene? Raha fantany i Etta, dia tsy niteny mihitsy izy. Maty an-dravehivavy izy ary nalevina teo akaikin'ny vadiny tao amin'ny fonjan'i United Allegheny, Pennsylvanie. Notaterina nandritra ny fifandraisana tamin'ny finday niaraka tamin'ny Cemetery aho fa tsy misy rakitsoratr'i Elsagene McCormick nalevina tany, na dia voalaza aza ny momba ny fahafatesany izay nalainy tany.
Raha manana fiainana hafa toa ahy i Elsagene, dia tsy zazalahy nanirery izy. Teraka tao amin'ny fianakaviana lehibe iray, ny ankizy enina fahenina, nandany zatovo tany amin'ny toerana maro izay hahitan'izy ireo sy hankafiziny amina toeram-pisakafoanana. Nanana talenta ara-javaboahary sy talata izy, nilalao ny lokanga sy ny gitara ary nanoratra hira toy ny zatovo, haniry hanambady sy hisara-panambadiana, hianatra mangoraka ny tolona ataon'i Etta amin'ny maha-reny tokan-tena ny zanany vavy. Ho tonga mpitsabo mpanampy izy, nahazo mari-pahaizana momba ny fanoratana amin'ny teny anglisy avy amin'ny Oniversiten'i Pittsburgh, miasa ho mpanao gazety, mpanoratra mpanoratra ary mpanoratra, mpanoratra boky maromaro, mampiseho ny zavakanto, ary noho ny fifandrifian-javatra mahagaga, dia tokony hotsaraina izy mba hijerena indray ny taloha tena. Lazao aminareo ny tantaran'i Elsagene. Tena mahavariana izany, na ny vatana vaovao na ny fifanoherana. Ary tamin'ity indray mitoraka ity, izaho na izahay na izahay dia mamela ity rakitsoratra ity misy fiainana iray na roa. Hahita indray ny tenantsika isika na raha mbola velona indray isika.
"Manakaiky kokoa an'Andriamanitra isika rehefa mametraka fanontaniana, toy ny rehefa mieritreritra isika fa manana ny valiny."-Abraham Josoa Heschel
"Ny mifanohitra amin'ny tsara dia tsy ratsy, ny tsy firaharahiany." - Abraham Joshua Heschel
Na dia maharesy lahatra aza ny tantaran'i Tikvah ary mijoro irery, dia nodinihiko niaraka tamin'i Kevin Ryerson izany. Ahtun Re, ilay mpitarika fanahy nampitaina tamin'ny alàlan'i Kevin izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amina marim-pototra avo lenta, dia manaiky na manamafy fa Tikvah Dobsch dia ny vatana vaovao indray Elsagene. Ny asa nataoko tamin'i Kevin dia azo jerena ao amin'ny: Fikarohana momba ny Reincarnation Ryerson-Semkiw
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny arkitekin-tarehy na ny taolam-paty hita amin'ny sarin'i Elsagene sy Tikvah, izay toa hitan'i Rota, renin'i Tikvah, izay nanosika an'i Rosiana hilaza tamin'i Tikvah fa nino i Rut fa i Tikvah dia ny fanambadiana ao Elsagene. Ny fitoviana ara-batana dia hankasitrahana tsara kokoa raha toa ny sary nalaina tamin'ny fomba fitenenana mitovy amin'izany. Tikvah ao amin'ny sariny kilasy voalohany dia mitsiky be, fa i Elsagene kosa dia tsikitsiky no voasambotra.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nahaterahan'i Jesosy tamin'ny nahaterahan'i Jesosy: Talohan'ny nahafatesany, i Elsagene dia nizara tamin'i Ruth ny fanararaotana ara-nofo izay niaretany. Elsagene dia naneho ny tsy fahasambarany mikasika ny toe-javatra niainany ary nanontany raha ho reny i Rota. Enin-taona taorian'ny nahafatesany dia hita fa teraka tamin'i Rit toa an'i Tikvah i Elsagene, izay mampiseho ny fomba ahafahan'ny fanahy manomana ny fiainany sy mifidy ny ray aman-dreniny.
Fiainana taloha Phobias & Nightmares: Tikvah dia manana phobias toy ny ankizy izay toa misaintsaina hoe voafandrika ao anaty efitrano iray ary voakapoka ho faty nandritra ny fiainany taloha, toa ny fomba nahafatesan'i Elsagene.
Zava-dehibe ny manomboka ireo phobias alohan'ny I Ruth, renin'i Tikvah, dia nilaza tamin'i Tikvah tamin'ny faha-5 taonany fa mino izy fa Tikvah no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray Elsagene. Raha nanomboka ny phobias taorian'ny nizaran'i Ruta ny finoany fa Tikvah dia teraka indray Elsagene, dia azo lazaina ho soso-kevitra ireo phobias.
Fanamarihana: Nisy dikan-teny fohy teo aloha momba ity tantara momba ny fanambadiana vaovao ity sy ireo sary navoaka Mozika avy amin'ny Violin iray tapaka: Memoir nataon'i Tikvah Feinstein, Taproot Press, 2011. Ny ampahany sasany amin'ny tantaran'i Elsagene dia hiseho ao Fanontana literatiora tapaka natao tamin'ny 25 in 2014.